Ibhodloze umuzi imoto kuThwala | News24
LAST UPDATED: 2018-10-22, 08:48
Ibhodloze umuzi imoto kuThwala
ISITHOMBE:nompendulo ngubane Umuzi wase Mbali Unit 3 lapho kungene khona imoto ephaphalaze kumgwaqo uThwala ongapheli ukwakhiwa.
ZIYAQHUBEKA nokwanda izinkinga kumgwaqo uThwala eMbali Unit 3 njengoba ngoLwesibili ekuseni kuphaphalaze imoto yaphuma emgwaqeni yayolimaza imizi emibili.
Imizi ethintekile kule ngozi kube umuzi wakwaVilakazi nomuzi wakwaMkhize. Omunye wemizi uye waqhuma udonga wafa nesango. Nasemgwaqeni imoto ishaye amatshe yawaphosa le kude lokho okwenze kubelula ukuthi iphume iyoshaya ilimaze le mizi.
Ngesikhathi iphephandaba i-Echo lifika endaweni yesehlakalo lifice omakhelwane bemile besamangazwe okwenzekile.
Akekho owakhona kuyo yomibili imizi otholakalile ukuphawula ngaphandle komakhelwane nababonile kwenzeka isehlakalo.
Ezinye zezinkulumo abebevungama ngazo ezixongololweni ebebezimile omakhelwane ukunganami mayelana nomgwaqo osekuthathe isikhathi eside kunalesi esabe sibekiwe ukuthi wakhiwa.
Omunye womakhelwane obonile ingozi yenzeka kodwa ocele ukuthi igama lakhe lingavezwa uthe lokhu kwenzeke ekuseni lapho abantu bephuma bonke belibangise emsebenzini.
Uthe kuqhamuke imoto yohlobo lwePolo nokukholakala ukuthi ihlulwe ukujika njengoba umgwaqo ungakhonkiwe nje.
Uthe le moto uyibone iqhamuka ngaphezulu yehla ngesivinini nokuthe uma ifika yavele yaphaphalaza yahlulwa ukujika.
“Ngenxa yokuhluleka ukujika le moto ivele yaphaphalaza yashaya amatshe abesemgwaqeni. Kuthe ingaqeda ukwenza njalo yaphaphalaza yayoshaya isango nodonga lweminye yemizi. Kulapho sikwazi ukubona ukuthi umuntu obeshayela umhlengikazi wesifazane naye olimalile kulesi sigameko ngoba kumanje uphuthunyiswe esibhedlela. Yena ulimalile ngoba uze wasizwa abantu abakhiphe imoto ngoba ingene yashaya isango yalimaza nodonga,” kusho lo makhelwane.
Omunye futhi umakhelwane, obekhona endaweni yesehlakalo, uthe into edala izingozi ukwakhiwa komgwaqo okungapheli futhi nokuthi azikho izimpawu ezikhombisa ukuthi abantu behlise ijubane ngenxa yokwakhiwa okuqhubekayo.
“Abantu baqhamuka beza ngesikhulu isivinini lokho okudala ukuthi bangaboni ukuthi kunejika nokuthi umgwaqo uyehlela. Abaqede ukwakha lo mgwaqo ngoba kwenzeke le ngozi nje emasontweni amane adlule bekukhona ezinye lapho kuphaphalaze khona izimoto.
Okubi kakhulu ukuthi akukho esitshelwa khona njengomphakathi. Sibona kuthule nje asazi noma umgwaqo usaqhubeka ukwakhiwa noma sekumile konke,” kusho lesi sakhamuzi.Lo msebenzi wokwakhiwa komgwaqo bekufanele uphele ngoNdasa kwabuye kwathiwa uzophela uNhlangulana kodwa awukapheli nabasebenzi abasenzi emsebenzini.
Ikhansela lika-wadi 22 uMnuz Pat Jaca uthe lesi sehlakalo uyazi ngaso futhi wakubeka kwacaca ukuthi into edala lokhu ukwakhiwa kwalo mgwaqo ongapheli.
“Abantu bahluphekile ngempela kanti futhi ngiyabavumela uma bethi into edala lokhu umgwaqo ongaphelile.
“Ngiyazwelana nomphakathi kanti futhi ngiyahambisana nabakushoyo,” esho uJaca
Bellville 08:35 AM